मकॉमर्स अब ईकमर्स भन्दा 200% बढ्दो छ Martech Zone
के तपाईले पहिलो वस्तु याद गर्नुभयो जुन तपाईले आफ्नो मोबाइल उपकरणमा किन्नु भएको थियो? म यकिन निश्चित छैन जब मैले मेरो पहिलो मोबाइल खरीद गरेको थिएँ, म अनुमान गर्दैछु कि यो या त अमेजन वा स्टारबक्स मोबाइल अनुप्रयोग मार्फत थियो। मोबाइल खरीदको केही सीमितता थियो - एउटा प्रयोग र टेक्नोलोजीको सहजता हो, अर्को लेनदेनलाई मात्र विश्वास गर्दै थियो। मोबाइल खरीदहरू अब दोस्रो प्रकृति बनिरहेका छन्, यद्यपि, र कुपोफीबाट तथ्या .्क प्रमाणित गर्नुहाेस।
वास्तवमा, जबकि ई-वाणिज्य १ 15% ले बढ्ने आशा गरिएको छ, मोबाइल वाणिज्य २०१ 31 मा %१% ले बढ्ने आशा गरिएको छ!
विश्वभर, जापान, युनाइटेड किंगडम र दक्षिण कोरियाको बृद्धि वर्षको बर्षमा करीव %०% को साथ नेतृत्व। अष्ट्रेलिया र नेदरल्याण्डले मोबाइल वाणिज्य 50 35% ले वृद्धि गरेको छ।
२०१ 2015 मा मोबाइल वाणिज्यमा सर्वाधिक वृद्धि देखेका शीर्ष पाँच कम्पनीहरूले OME 634% को साथ गोम इलेक्ट्रिकल उपकरण, bra००% नेब्रास्का फर्निचर मार्ट, ha 500% योहोडियन, IPS 456१% VIPhop होल्डि and र pp 451%% संग हप्पीगो छन्।
अमेरिकामा सब भन्दा ठूलो मोबाइल वाणिज्य प्रदायक टिकटमास्टर, एप्पल, लक्ष्य, QVC र कोहल (त्यो क्रममा) हुन्। अचम्मको कुरा, अमेजन अझै शीर्ष in मा छैन! यी सबै व्यापारीहरूले देखेका छन् लगभग %०% वृद्धि मोबाइल ट्राफिक र बिक्रीमा। वैश्विक स्तरमा, ई-कमर्स नेता eBay उपभोक्ताहरूलाई स्मार्टफोन र ट्याब्लेटमा खरीद गर्न सजिलो बनाउन यी उपकरणहरूबाट खरीदको मूल्यको रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्न जारी राख्छ प्रत्येक वर्ष २१% बढ्यो.
प्रति कार्ट औसत अर्डर मान ट्याब्लेट प्रयोगकर्ताहरूको साथ अझै उच्च छ
यो औसत अर्डर मान एक ट्याबलेट शपरको १०० डलर छ जबकि एक स्मार्टफोन रूपान्तरणबाट एक शपर औसत $ $$ छ। साथै, एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट मोबाइल खरीददारहरू आफ्नो आईओएस समकक्षहरू भन्दा उनीहरूको अर्डर मान २२% कम छ भनेर ज्ञात छ। यद्यपि, एन्ड्रोइड उपकरणहरूमा तीन गुणा बढी खरीददारहरू छन्। तपाईको अनुभवले iOS र एन्ड्रोइडमा काम गर्दछ भनेर निश्चित गर्न त्यो पर्याप्त छ।
टैग: अमेजनस्याऊऔसत अर्डर मानकपोफीeBayइकमर्सग्लोबल एम कमर्सग्लोबल mcommerceजापानkohlsमोबाइल वाणिज्यअर्डर मानQVCदक्षिण कोरियास्टारबक्सट्याब्लेट बनाम मोबाइल अर्डर मानलक्ष्यटिकटमास्टरसंयुक्त राज्य
W तरिका स्नैपच्याट तपाईको व्यवसाय लाई बढावा दिन प्रयोग गर्न सकिन्छ
घुसाउनुहोस्: कोडलेस मोबाइल अनुप्रयोग स Eng्लग्नता सुविधाहरू